Blog – United Vision | Eye Wears and Eye Care Hospital in yangon
All CategoriesAlain delonBalenoBoniaBurberry FrameBurberry SunglassesCeline DionEyeglassesGuy LarochemartiniOutdo SportPal ZileriProsunRay BanRay Ban Frame
အတွင်းတိမ်ဝေဒနာရှင် (၂၆၂) ယောက်ကို **အခမဲ့** ခွဲစိတ်ပေးလိုက်နိုင်ပြီ
United Vision မှ အတွင်းတိမ်ဝေဒနာရှင် (၂၆၂) ယောက်ကို **အခမဲ့** ခွဲစိတ်ပေးလိုက်နိုင်ပြီ။ United Vision ၏ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူ အတွင်းတိမ်ဝေဒနာရှင်များအား တနင်္လာနေ့တိုင်း အခမဲ့ခွဲစိတ်ပေးသည့် အစီအစဉ်မှ ၂၀၁၆၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၆၊ နိုဝင်ဘာလအထိ၊ (၁၁) လအတွင်း၊ ပြင်ပလူနာ စုစုပေါင်း (၁၈၀၂) ယောက်၊ အတွင်းတိမ်ဝေဒနာရှင် (၂၆၂) ယောက်အား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ | အခမဲ့ခွဲစိတ်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ ၄၅၀ ၆၂၈
United Vision မျက်စိ ဆေးရုံ ဖွင့်လှစ်ခြင်း
United Vision မျက်စိဆေးရုံကို အမှတ် ၂၆၃၊ (၁၂/၁၃လွှာ) ရွှေဘုံသာအလယ်လမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ အတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ရေတိမ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုများကို လေဆာဖြင့်ကုသပေးခြင်း၊ ရေတိမ်ဝေဒနာရှင်များကို လေဆာဖြင့် ကုသပေးခြင်းများအပြင် အတွင်းတိမ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များကို ခွဲစရာမလို၊ ချုပ်စရာမလိုဘဲ (Phacoemulsifier - Ultra Sound System) ဖြင့် မျက်လုံးအတွင်းရှိ တိမ်များကို ခြေမွစုပ်ယူပြီး အလွန် သေးငယ်တဲ့ (Foldable Intra Ocular
How to choose best sunglass for you
ယနေ့ခေတ်ဖက်ရှက်များကို စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ယောက်အဖို့ မျက်မှန်က မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ အသုံးအဆောင် တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် မျက်မှန်ကို ရွေးချယ်ရခက်တာပါ။ ဈေးကြီးတဲ့ မျက်မှန်ကိုဝယ်ပြီးမှ မိမိနဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ လူတွေက ပြောကြရင် အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်စရာပါ။ ပိုက်ဆံလည်းကုန်သေး၊ မျက်မှန်တပ်လိုက်တိုင်းလည်း မလိုက်ဘူးလို့ ပြောနေကြမှာလေ။ ကျွန်တော်တို့ United Vision ကတော့ ဖောက်သည်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုတည်းသာမကဘဲ ဈေးနှုန်းရော ဗဟုသုတများကိုပါ အကောင်းဆုံး ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ မိမိနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် မျက်မှန်ရွေးနည်းလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာပုံစံ
© 2017 United Vision Eye Care Centre . All Rights Reserved. Powered by Myanmar Web Designer